चित्रबहादुरले भने- विदेशीको इसारामा आएको विधेयक फिर्ता होस्
संसद लगातार चौथो पटक स्थगित
प्रकाशित मिति : २०७३ मङ्सिर २२ बुधबार , ३,७६८ पटक हेरिएको
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दलहरुको अवरोधले वुधबारको संसद बैठक समेत रद्द भएको छ । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म सडक र सदन विरोध नछोड्ने अडानमा रहेको एमाले, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाले लगातार चोथो पटक संसद अवरुद्ध गरेका हुन् । बैठक सुरु हुनुअगावै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशीको इशारामा सरकारले संशोधन विधेयक ल्याइएको आरोप लगाए ।
केसीले भने, ‘यो ‘राष्ट्रघाती’ संशोधन विधेयक हो । यो फिर्ता नलिएसम्म हामी संसद चल्न दिदैनौ । केसीले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि विपक्षी दलका सांसदहरु आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले गरेको पटक–पटकको आग्रहलाई अटेर गर्दै विरोधमा उत्रिएका सांसदहरुले उनलाई सुनेनन् । विपक्षी सांसदहरुले विरोध नछोडेपछि सभामुख घर्तीले संसद बैठक मंसिर २४ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराइन् । सरकारले एक साता अघि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक विपक्षीको अवरोधकै कारण संसदको कार्यसूची सम्म पुग्न सकेको छैन ।
सरकाकारले विधेयक दर्ता गरेको भोलिपल्टै देखि विपक्षीहरुले सडक र सदन आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले ल्याउन लागेको पुरक बजेट, निर्वाचन सम्बन्धि कानुन निर्माण अलपत्र परेका छन् । यस्तै, संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग समेत अल्झिएको छ ।
चित्रबहादुरले कहाँ–कहाँ छाने उम्मेदवार ?
चित्रबहादुरले भने–एउटै चिन्तन भएकाहरुले किन छुट्टै चुल्हो बाल्नु त ?
चित्रबहादुरले अहिलेसम्म कति जना उम्मेदवार छाने?
चित्रबहादुरले यस्तो बनाउँदै छन् रणनीति
चित्रबहादुर केसीको प्रश्न ‘लोकतन्त्रका ठेकेदारहरु तीनदलमात्रै हुन् ?'
चित्रबहादुरको पार्टीले आफ्नो जिल्लामा बल्ल खोल्यो खाता
चित्रबहादुरले दिए कमल थापालाई साथ
चित्रबहादुरको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख